Huawei P20 Lite: famaritana, vidiny ary fanombohana | Androidsis
Huawei P20 Lite: ny eo afovoany premium koa dia miloka amin'ny laharam-pahamehana
Huawei dia nanolotra ny finday avo lenta vaovao any Paris, Huawei P20 sy P20 Pro, izay noresahinay taminareo ny zavatra rehetra momba an'io lahatsoratra. Saingy tsy izany ihany no navelan'ny marika Sinoa tamintsika tamin'ity hetsika ity. Satria izahay koa afaka nihaona tamin'ny telefaoninao vaovao tao anatin'ny elanelam-potoana avo lenta. Momba ny Huawei P20 Lite izany. Ny maodely mora indrindra amin'ireo telo ireo.
Fitaovana iray izay eo afovoany midadasika indrindra amin'ny lamaody. Noho izany dia manana ny masontsivana izay mampiseho finday kalitao. Ny marika dia efa naseho tamin'ity asio ny famaritana feno ny Huawei P20 Lite. Inona no azontsika antenaina?
Toy ny zokiny lahy, ny famolavolana ny fitaovana dia misongadina amin'ny fisian'ny fanamarihana. Sombiny iray izay tsy dia maharesy lahatra ny mpampiasa maro. Na dia hitantsika aza fa izany dia teboka malina kokoa noho izay hitantsika tamin'ny maodely hafa. Ka tsy antsipirihany manjaka amin'ny efijery an'ity Huawei P20 Lite ity. Ary koa, zavatra tadiavinao io araraoty ny endrika fampifanarahana amin'ny ho avy miaraka amin'ny Android P.
Araka ny efa nolazainay taminao, ny efa naseho ny antsipirian'ny telefaona amin'ny fomba ofisialy amin'ity hetsika natao tao Paris ity. Avelantsika eto ambany izy ireo.
1 Famaritana Huawei P20 Lite
Famaritana Huawei P20 Lite
Famaritana teknika Huawei P20
modely P20 Lite
Operating System Android 8.0 Oreo miaraka amin'ny EMUI 8.1
efijery LCD LCD 5.84 misy vahaolana (2.244 x 1.080) Full HD +
Fakan-tsary aoriana 16 + 2MP RGB miaraka amina f / 2.2 aperture
Fakan-tsary aloha MP 16 miaraka amina f / 2.0 aperture
Fitaovana hafa Fampahalalana momba ny dian-tànana sy fanekena tarehy
bateria 3.000 mAh miaraka amina fiampangana haingana
vidiny 389 euros
Ny famolavolana ny telefaona koa dia miavaka amin'ny fananana a tapany aoriana vita amin'ny kristaly ranoka. Andininy iray izay mahatonga ny telefaona hanana endrika finday avo lenta. Avy amin'ny zavatra hitantsika fa Huawei dia nitandrina tsara ny antsipiriany tamin'ny fitaovana. Zavatra iray izay tsy maintsy omentsika lanja amin'ny fomba tsara. Ankoatry ny mameno tsara ny volavolain'ireo telefaona roa hafa natolotra androany.
Raha ny ao anatin'ity Huawei P20 Lite ity dia tsy dia misy tsy ampoizina loatra. Ny marika sinoa dia nisafidy an'i Kirin 659 ho toy ny processeur, mitovy amin'ny an'ny Huawei P10 Lite. Ka nisafidy ny hanohy izany izy ireo, toa nahafa-po ny valiny tamin'izany. Ankoatr'izay, miaraka amin'ny RAM 4 GB sy tahiry anatiny 64 GB. Fomba tsara, izay tanterahin'izy ireo hiantra.
Ho an'ny rafitra fiasa dia tsy diso fanantenana ny marika ary mahita ny kinova farany farany an'ny Android amin'ny fitaovana izahay. Satria hanana Android Oreo nitaingina tanindrazana. Ka ny mpampiasa dia afaka mankafy ny tombony rehetra atolotry ny kinovan'ny rafitra miasa eto amintsika hatramin'ny voalohany.
Ho fanampin'izany, ny telefaona dia manana fakantsary aoriana avo lenta, zavatra izay efa mahazatra ao anatin'ny faritra misy azy. Milalao amin'ny fakantsary 16 + 2 MP. Noho io fitambarana io dia hankafizinay ireo fiasa toy ny vokan'ny bokeh malaza. Eo alohan'ny telefaona dia misy a Fakan-tsary 16 MP sy sensor hafa. Io no sensor izay ampiasaina amin'ny famohana ny tarehy amin'ity Huawei P20 Lite ity.
Ny Huawei P20 Lite koa dia hamidy amin'ny loko efatra. Na dia amin'ity tranga ity aza izy ireo dia tsy mitovy loko hitantsika tamin'ireo maodely avo lenta roa. Amin'ity tranga ity, ny telefaona dia ho misy amin'ny volamena, mainty, manga ary mavokely. Ka tsy ho hitantsika ilay feon'ny Twilight izay tena tian'ity fitaovana ity.
Mikasika ny vidin'ny fitaovana, Toa voamarina ihany tamin'ny farany fa 369 euro izany. Tamin'ny voalohany dia voalaza fa ho 389 euro izy ireo. Fa toa ho mora kely ihany ny telefaonin'ny marika sinoa amin'ny farany. Azontsika atao ny mividy izany amin'ny vidiny eto amin'ny firenentsika.
Momba ny daty famoahana azy, Ny Huawei P20 Lite dia efa misy amin'ny fomba ofisialy eto amintsika. Azonao atao izao ny mividy azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei P20 Lite: ny eo afovoany premium koa dia miloka amin'ny laharam-pahamehana
Azo ampiasaina amin'ny takelaka Android izao ny browser Microsoft Edge
Huawei P20 sy P20 Pro: Eto ny avo lenta Huawei